VLC Media Player waa mid aad loo jecel yahay maalmahan. Waxaa la og yahay sida la qaadi karo,, a free cross-madal warbaahinta ciyaaryahanka . Soo tago waxaa ka, waxa sidoo kale server warbaahinta geeyo, taas oo la og yahay in la qoray ka badan mashruuca VideoLan kale ma jiro.
Iyadoo ay run tahay in VLC Media Player ka mid ah qalabka warbaahinta ugu caadiga ah, waxaa weli jira jeer marka aad la kulantid qaar ka mid ah dhibaatooyinka ama dhibaatooyin ka la isticmaalayo. Ma waxaad tahay kuwa la kulmaan arrimaha qaar ka mid ah ama dhibaatooyin ka la isticmaalayo VLC Media Player ka mid ah? Haddii aad tahay, ka dibna aad u baahan tahay si ay u isticmaalaan kaaliyaha VLC si aad u hagaajin karto wax kasta oo loo baahan yahay in la hagaajiyo.
Waxaa jira qaddiyado badan oo in lagu daro karaa VLC Media Player. Waxaa ka mid ah kuwaas waa arrin aanu cod laheyn. Dad badan ayaa horey u kala kulantay dhibaato noocan oo raadinayso hab si ay u xaliyaan.
Qeybta 1: VLC Media Ma Play Player Videos MKV?
Qeybta 2: Sida loo dayactir beddeli kara Video Iyadoo VLC Player?
Qeybta 3: Best VLC Kaaliyaha
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah faylasha, oo ay ku jiraan qaar ka mid ah videos, in VLC Media Player ma taageeri aan. Waa inaad taqaanaa noocyada files in VLC ciyaari karo. Waa hagaag, waa hubaal, ah MKV video ma aha mid iyaga ka mid ah, maxaa yeelay, VLC ma taageeri videos MKV. Sidaa darteed, ma waxaad filan kartaa in ay si habsami leh u noqon ciyaaro noocan ah ee video aad ciyaaryahan warbaahinta caadiga ah. Tani ayaa ka mid ah Jahwareer weyn ee isticmaala VLC. Waxaa jira wax badan oo MKV files in dadka isticmaala inta badan hubaal doonayaa inaan u ciyaaro. Si kastaba ha ahaatee, waxay yihiin clueless sida ay u ciyaaro ciyaaryahanka ay warbaahinta uusan inayna ku taageeri marka.
Runta waxa ay tahay in VLC akhriyi karaa si fudud oo u furan videos MKV. Si kastaba ha ahaatee, taasi waa waxa ay ku siin karaan oo keliya! Waxay furi karaan oo kaliya oo akhriyey, laakiin ma yabooho in ay ku ciyaaraan jabaqaha ama arrin muhiim kasta. Ma jiro wax xaqiijinaya in aad ku ciyaari kartaa video-sami ah. Ma jirto sabab macquul ah oo sare oo aad la kulmi doontaa dhibaato qaar ka mid ah. Qaar ka mid ah arrimaha laga yaabo in ay caqabad ku aad ku riyaaqayaa isticmaalka aad warbaahinta ciyaaryahan waa arrimaha ku lug leh cod jirin, khaladaadka ku Cinwaan dibadda ah iyo qaar badan.
In kastoo arrinku sidan yahay, dadka isticmaala VLC weli waa kuwo nasiib fiirsaneysa xaqiiqda ah in ay jiraan wax ay qaban karaan si ay u ha videos MKV habsami ciyaaro iyadoo la isticmaalayo ay media player. Mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad samayn kartid si ay u xaliyaan dhibaatadan waa inay ku tiirsanaadaan kaaliyaha VLC. Iyadoo ku xigeenka VLC, ciyaaro files aqlka media player VLC habsami leh hadda waa suurto gal.
Dadka qaar si dhakhso ah Forbes ayaa soo baxay markii ay la kulmi beddeli kara video. Waa maxay dadkani ma oga waa in aan wax ka badan hal khiyaar noo si ay u xaliyaan dhibaato noocan ahi. Waxyaalaha hoos ku qoran yihiin fursado aan la eego qamaar beddeli kara video la VLC Player.
Mid ka mid ah sababo badan oo ay suuragal tahay sababta video waa beddeli kara waa xaqiiqda laga yaabaa in aysan noqon socon ama ku haboon aad ciyaaryahan video hadda. Haddii ay taasi waa sababta, markaas waxaad fursad u haysataa in la beddelo video ciyaaryahan aad. Tixgeli dooranaya mid ka mid ah kuwa ugu caansan ciyaartoyda video oo waxaan arki doonaa inay la jaanqaadaan aad file ama aan. Qaar ka mid ah ciyaartoyda video laga yaabaa in aad u fudud halka qaar kalena waxaa laga yaabaa in muuqaalada dheeraad ah oo laga yaabo in ay u qanciso baahidaada loo maqli karo video aad.
2.) Ku rakib koronto-tago /-socodka
Haddii aadan rabin in la beddelo media player aad, markaas waxaad fursad u haysataa kale. Your doorasho labaad waa in la gaarsiiyo iyo darto, haddii ay suurogal tahay, muuqaalada qaar ka mid ah warbaahinta ciyaaryahanka haatan. Just dhirtuba ku saabsan waxa-socodka ama fur-tago ayaa la heli karaa.
3.) Isticmaal All-in-Mid ka mid ah Software
Haddii aad u malaynayso in aadan jeclaan laba doorasho hore, ka dibna laga yaabo in aad rabto in aad isticmaasho talinayaa software dhan-in-mid. Waa in wax taageera kala duwan ee wax soo saarka iyo file aqbasho qaabab. Hubi in waxa uu leeyahay muuqaalada in aad u malaynayso in laga yaabo in ay waxtar kuu maanta iyo mustaqbalka.
Arrinta ugu badan ee soo food saaray dadka isticmaala VLC waa arrinta iyagoo ku maqli karaa codka lahayn on videos MKV ay. Haddii aad ka cabanaya dhibaato noocan ahi, ka dibna ku farxi doonaan in aadan ahayn qofka kaliya ee qaba ka iyo in ay jiraan kaaliyayaasha VLC oo kaa caawin kara dhibaatada.
Waxaa lagu talinayaa inaad isticmaasho ah kaaliyaha ugu fiican VLC si aad u hesho 100 boqolkiiba ku qanacsan tahay. Haddii aad is-weydiinayaan waxa ay ku xigeenkii ugu fiican VLC yahay, waa ka ahayn Wondershare Video Converter Ultimate ma jiro. Waxaa akhriya iyo taageerada tiro ka mid ah wax soo saarka iyo file aqbasho qaabab. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in aad edit karaa video files on this software, waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa YouTube videos iyo samayso mid kuu gaar DVD s. Ma aha in wax weyn? Haddii aad mar dambe ma ay rabaan in ay la dhibayay dhamaan arrimihii ay suurtagal tahay in la isticmaalayo VLC ciyaaryahan warbaahinta, markaas waxaa fiican in aad kala soo bixi Wondershare Video Converter Ultimate sida ugu dhaqsaha badan.
Sida loo Play .avi Videos warbaahinta VLC Player?
VLC Downloader - Sida loo soo bixi videos isticmaalaya VLC Media Player
Qaado Snapshots in VLC Media Player daaqadaha iyo Mac
> Resource > VLC > Top VLC MKV Radidiyaha Arrimaha